सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड कहिले हुने ? - News Book Online
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड कहिले हुने ?
साउन २७, २०७८ २२:१० प्रकाशित
बैंकहरूबाट आईपीओकाे भेरिफिकेसनकाे काम सक्किएकाे र क्यापिटलकाे रिपाेर्ट जेनेरेट गर्ने काम बाँकी रहेकाे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख अपरेटिङ्ग अफिसर कृष्ण गिरीले जानकारी दिएका छन्।उनले सकभर आउँदाे आइतबार आईपीओ बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेकाे बताए ।
अन्तिम दिनसम्म म्पनीको आईपीओमा २४ लाख १९ हजार १ सय २७ आवेदकबाट ३ करोड ६९ लाख ४३ हजार ४ सय ४० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको जनाएको छ । यो मागभन्दा ६.८४ गुणा बढी आवेदन हो । कम्पनीको आईपीओले हालसम्मका सबै रेकर्डहरु ब्रेक गरेकाे थियाे ।